म के हुँ ? | मझेरी डट कम
म के हुँ ?
kbs — Sun, 06/05/2011 - 09:17
युवामञ्च २०६८ जेठ
एकजना थिए डाक्टर ज्याकिल । उनी अत्यन्त दयालु चिकित्सक थिए । नाम चलेको थियो । मानिसहरूले उनको तारिफ गर्थे । अर्का थिए मिष्टर हाइड । उनी रातको अँध्यारोको फाइदा उठाउँदै अपराध गर्थे । सिङ्गो समाज मिष्टर हाइडदेखि त्रस्त थिए । वास्तवमा डाक्टर ज्याकिल र मिष्टर हाइड एकै व्यक्तिका दुई बेग्ला बेग्लै रूप थिए । समाजमा यस्ता थुप्रै मानिस हुन्छन्, जसले आफूलाई विद्वान् घोषणा गरिरहेका हुन्छन् तर यथार्थमा विद्वान् हुन्नन् । त्यसो भए त्यस्ता मानिस को हुन् त ?
एक पटक तपाईं आफैँले आफ्नो व्यवहारको समीक्षा गर्नुस् । अनि आफैँलाई प्रश्न गर्नुस्- म के हुँ ?
एकपटक तपाईं आफ्नो बानी व्यहोराको समीक्षा गर्न बस्नुस् त ! भनिन्छ, ज्ञानी, गुणी तथा सज्जनहरू सधैँ झुक्दछन् । विनम्र स्वभावका हुन्छन् । भनाइ पनि छ, 'फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र ?' तर 'सोझो औंलाले घ्यु आउँदैन' भन्ने पनि त छ । त्यसकारण तपाईं हठी र कठोर हुनुहुन्छ । तपाईंलाई लागेको छ, 'विद्वान् हुँ । समाजले नमानेको मात्र न हो ।' त्यसैले तपाईं फुलेल हुनुहुन्छ । ज्ञान, विद्या, धन, रूप, बल आदिको प्रदर्शन गर्न खोज्दा विवादमा अल्झन पुग्नुहुन्छ । ज्ञान मार्गको सुखदायी बाटो त तपाईं सपनामा पनि सम्झन चाहनुहुन्न । आफूमा निहित विद्या, बुद्धि, बल, धन, मान, पद, प्रतिष्ठा कुनै कुराको प्रवाह नगरी आफ्नो कर्तव्य कर्ममा दत्तचित्त भएर कसरी अरूको भलो हुन्छ भन्ने विचार गर्नेहरू तपाईंको विचारमा बेकुफ हुन् । अरूबाट उनीहरूले प्राप्त गर्ने प्रशंसा र सामािजक प्रतिष्ठा त देखावा मात्र हुन् ।
नीतिशास्त्रको एउटा भनाइ छ- 'वाग्भूषणं भूषण' अर्थात् बोलीरूपी गहना नै मानिसको सच्चा आभूषण (गहना) हो । तपाईंलाई भने वाणीरूपी सच्चा गहनाद्वारा भूषित बन्नु सज्जन तथा ज्ञानीहरूको लक्षण एवं दायित्व हो भन्ने पटक्कै लाग्दैन । बोलीले हुने भए दुनियाँमा गोली चल्ने नै थिएन । कसैले वचनको अनुचित प्रयोगबाट मानिस मूर्खको श्रेणीमा र्झछ भनेर भन्छ भने तपाईंको विचारमा त्यो भन्दा वाहियात कुरो केही हुनै सक्दैन । मुख भएपछि अर्काको कुरा किन काट्न नपाउनु ? निन्दा गर्न किन नपाउनु ? जिन्दगीमा धेरै समय अनुशासनमा नै बसिन्छ, कहिलेकाहीँ मौका पाउँदा अनुशासन उल्लंघन गर्न र अश्लील बोल्न किन नपाउनु ? सज्जनहरूले त हुति नभएका कारण सधैं सत्य, मधुर र हितकारी वचन मात्र बोल्छन् । उनीहरू बेकुफ हुन् र त तपाईं जस्तालाई दुर्जन र मूर्ख भन्दै जवाफ फर्काउँदैनन् । आखिर तपाईं यस्तै सोच्नुहुन्छ होइन त ?
भन्नेहरू भन्छन्- जिब्रोबाट बोलिने वचनको प्रभाव मस्तिष्कमा परी भावको शुद्धि अशुद्धिमा अति महìवपूर्ण भूमिका रहने हुँदा बोल्नु अघि विचार गर्नु जरुरी छ । बोलेर पछुताउनुभन्दा बोल्नुअघि सावधानी अपनाउनु उत्तम हुन्छ । मूर्खहरू बोलेर सोच्छन्, ज्ञानीहरू सोचेर बोल्छन् । बन्दुकको गोली र मुखबाट निस्केको बोली र्फकंदैन । तपाईंलाई यी भनाइमा पटक्कै विश्वास लाग्दैन । तपाईंलाई त नबोलेर पछुताउनुभन्दा बोल्नु नै बेस लाग्छ, होइन त ?
तपाईंको अर्को विशेषता पनि छ । आफ्ना कुरा र विचारले अरूलाई सधैँ जित्न खोज्नु । अर्काले यसलाई जिद्दी गर्नु भन्ने गर्छन् । तपाईं भने यसलाई आफ्नो क्षमता प्रदर्शन मान्नहुन्छ । 'मेरो गोरुको बाह्रै टक्का' गर्न पाइएन भने के महìव रहृयो र ? भन्नेहरू सत्यको समर्थन र सम्मान गर्न नसक्ने मानिस उन्नति र कल्याणको मार्गलाई छोडेर दुःख र विपत्तिको भुमरीमा पर्दछ भन्छन् ।
अरूका कुरा वा विचार सुन्ने, सुन्न सक्ने धैर्यको अभाव भएकाहरू कल्याणकारी ज्ञान मार्गबाट विमुख अज्ञानी वा अपठित हुन् भन्नेहरूको सङ्ख्या संसारमा कम छैन । तपाईंलाई भने के लाग्छ भने अरूका कुरा वा विचार मात्र सुन्नुको त अर्थ नै छैन । अर्काको कुरा मात्र सुन्ने हो आफ्ना अमूल्य कुरा कहिले र कसलाई सुनाउने त ?
तपाईंलाई आफू सही छु भन्ने लाग्छ होइन त ? त्यसो हो भने निश्चय नै तपाईंभन्दा मूर्ख मान्छे संसारमा कोही हुने छैन । किनभने-
घमण्ड गर्नु अर्थात् अहंकार प्रदर्शन गर्नु मूर्खको पहिलो तथा प्रमुख लक्षण हो । ज्ञानी, गुणी तथा सज्जनहरू त सधैँ झुक्दछन् । विनम्र स्वभावका हुन्छन् । मूर्खहरू भने हठी, कठोर र सधैं घमण्डले फुल्ने गर्दछन् ।
अर्को कारणले पनि तपाईं मूर्ख हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ । किनभने-
सज्जनहरू सदासर्वदा सत्य, मधुर र हितकारी वचन बोल्छन् । उनीहरू दुर्जन तथा मूर्खहरूको वचनको जवाफ पनि दिँदैनन् । मूर्खहरू बोलेर सोच्छन्, ज्ञानीहरू सोचेर बोल्छन् । नत्र त्यत्तिकै त भनिने थिएन नि -बन्दुकको गोली र मुखबाट निस्केको बोली र्फकंदैन ।
अर्को कुराले पनि तपाईं मूर्ख भएको प्रमाणित गर्दछ । किनभने-
आफ्ना कुरा र विचारले अरूलाई सधैँ जित्नु अर्थात् जिद्दी गर्नु मूर्खको लक्षण मानिन्छ । तर महापुरुषद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त र विचारमा निष्ठा राखेर त्यसको पक्षमा अडिग र स्थिर रहनु चाहिँ हठ वा जिद्दी नभई उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक गुण हो । यसका लागि कुनै विचार वा सिद्धान्तको गहन अध्ययन मनन गरेर त्यसको सार ग्रहण गर्नु अत्यावश्यक छ । महापुरुषहरू भन्दछन्- मूर्खताको पराकाष्ठा मानिसको हठ हो । आफ्नो बुद्धिको सबैद्वार बन्द गरेर लिडँेढिपीमा अड्ने मूर्खले सत्य प्राप्त गर्न सक्दैनन् । बालुवाबाट तेल निकाल्न सकिन्छ तर हठमा अडेको व्यक्तिलाई सद्बुद्धि दिन सकिँदैन ।
अरूको कुरा नसुन्नु पनि मूर्खको मुख्य लक्षण हो भनिएको छ । मूर्खहरू स्वभावतः मूर्खहरू भलाई हुने असल अर्ति उपदेश सुन्न र ग्रहण गर्न चाहँदैनन् उनीहरू आफ्ना मित्र तथा हितैषीहरूका हितकारी र सही सल्लाहको कदर र कार्यान्वयन गर्दैनन् । उल्टै सज्जन तथा ज्ञानीहरूप्रति ईष्र्याद्वेषको भाव राख्दछन् । आफ्ना कुरा मात्र गर्ने, अरूको कुरा सुन्न नसक्ने मूर्ख झूटो र सही ठीक बेठीक विवेचना, निर्णय गर्न असमर्थ भई अज्ञानको अन्धकारमा रुमल्लिरहन्छन् । अन्तरनिहित मूखतापूर्ण स्वभावको पहिचान गरेर ज्ञानी एवं सज्जन बन्ने प्रयत्न गर्नु नै सबैको हित कल्याण छ ।
घमण्डले मानिस फुल्छ तर अघि बढ्न सक्दैन । त्यसैले उसको पतन हुन्छ । उसको पतन अवश्याभावी छ । त्यसैले मूर्खता वा अज्ञानको जड धनादिको अहंकार वा अभिमानको परित्याग नगरी मानिसले सत्शास्त्रको अध्ययन मनन गरे पनि त्यसबाट कुनै लाभ हुँदैन ।
महाभारत भन्दछ- घमण्ड गर्नु, नराम्रो कुरा बोल्नु, जिद्दी गर्नु र अरूको कुरा नसुन्नु यी मूर्खका लक्षण हुन् । भनिन्छ- संसारमा सबै कुराको औषधि छ तर मूर्खको औषधि छैन । अब तपाईं आफैं निर्णय गर्नुस्- आनीबानी सुधार्ने कि मूर्ख बनिरहने ?
पिउदिन भन्दा भन्दै अलिकति पिलाई दियौ
पहिले पहिलेका बहादुर अच्छे लोग थे
पुरूष हौ तिमी
प्रष्ट बोली : स्पष्ट व्यवहार
वैचारिक युद्ध लडौँ
शराब पिई जिउँदैछु
हिजो राति बगैचामा, एउटा फूल सारेको
तिमीलाई धेरै झपार्नु छ
शिक्षा क्षेत्रमा मण्टेश्वरी शिक्षण पद्धति
यो फूल जस्तो त्यो मन भए
स्वदेश डढ्दा इनार नख्नु
कमेन्ट सुझाव दिन छाड्दा झन् गल्ति गर्न मन लाग्यो
आजको गजल (धेरै वर्ष देशैभरि)
गजल (दशैँ मान्न)
मानवीय विवेकको वकालत गर्ने कविताहरू
झण्डा यो नुझुकोस्
मनको हैन मुखको मात्र